Akhlaaqda Dagaalka iyo aragtida Islaamka Dhageyso – Radio Muqdisho
Toddobaadyadii la soo dhaafay maleeshiyada Alshabaab waxa ay Soomaaliya iyo Kenya geysteen gabood fallo fool xun oo ay ku xasuuqeen dad aan waxba galabsan.
Maleeshiyadu waxay dhammaadkii bishii na dhaaftay in horraantii bishan December ku xasuuqeen Mandheera Kenya dad xoogsato ah oo ay qaarna madaxa ka toogteen kuwo kalena bireeyeen iyagoo hurda.
Kooxdu waxay bartilmaameed ka dhigatay dad aan muslim ahayn, oo ay u xasuuqday in aysan muslim ahayn darteed, waxayna qiil ka dhigatay inay u aar gudeyso dhibaato ay sheegtay in Kenya ku haysto muslimiinta.
Rag culimo sheegtay oo u hadlay Alshabaab ayaa ku dooday in ay xalaal tahay in la laayo dadka aan muslimka ahayn, iyagoo gaaleysiiyay cid kasta oo arrintaas dood ka keenta.
Haddaba si aan arrintaas u iftiiminno, ayaan barnaamijkeenna Tubta Toosan uga hadleynaa Akhlaaqiyaadka iyo Aadaabta dagaalka iyo waxa ay ka qabto Shareecada Islaamku.
Waxaa barnaamijka marti noogu ah Sheikh Muuse Macallin Cagaweyne.
Muqdisho Oo Laga Xusay Maalinta Xuquuqda Aadanaha “Sawirro”